Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » ISingapore neIndiya Zifikelela kwiSivumelwano esitsha kwiiNqwelomoya
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSingapore zokuPhula • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Iinqwelomoya ezintsha zaseSingapore zaseIndiya
Ethetha ngokuqala kwakhona okucetywayo kweenqwelomoya phakathi kweIndiya kunye neSingapore ukusuka nge-29 kaNovemba phantsi kweNdlela yokuHamba eVaccinated (VTL), uJyoti Mayal, uMongameli, i-Travel Agents Association of India (TAAI), wandise iminqweno yakhe efudumele kunye nombulelo kwiGunya lezoPhapho laseSingapore. (CAAS) kunye ne-Indian Ministry of Civil Aviation ekuqalisweni kweenqwelomoya ezicwangcisiweyo zorhwebo phakathi kwala mazwe mabini.
I-VTL yaseSingapore kunye neIndiya iya kuqala ngeenqwelomoya ezikhethiweyo ezintandathu yonke imihla ukusuka eChennai, eDelhi, naseMumbai. Izicelo zokupasa okugonyiweyo okugonywayo kwabo baphumelele ixesha elifutshane kunye nexesha elide ukusuka eIndiya ziya kuqala ngoNovemba 29. “Ukuthatha inyathelo lokungena. ixesha lokuxhaphaka kwe-Covid ngenene linyathelo elikhaliphileyo elingasayi komeleza kuphela ubudlelwane phakathi kwala mazwe mabini kodwa liya kusebenza njengokuvuselela icandelo lezokhenketho. Ndiziva ngamandla ukuba iinqwelomoya ezininzi zorhwebo ziyafuneka ukuze kuvuselelwe ukungena ngaphakathi ukhenketho ukuya eIndiya,” waphinda wacaphula.
Iinkampani zeenqwelomoya zinokusebenzisa iinqwelomoya ezingezizo eze-VTL phakathi kwala mazwe mabini, nangona abakhweli kwiinqwelomoya ezingezizo eze-VTL baya kuba phantsi kweemfuno ezikhoyo zempilo yoluntu. “Thina e-TAAI besisoloko sithethathethana noMphathiswa wezoPhapho, kuRhulumente waseIndiya. Ukuvulwa kwesibhakabhaka kwiindlela zabakhweli bezorhwebo zamazwe ngamazwe kuqaqambisa iinkxalabo zethu ngokulula ekwenzeni ushishino,” utshilo uJay Bhatia, uSekela Mongameli we-TAAI.
Ukuthatha iinzame ezintle, i-TAAI Southern Region ngokubambisana neBhodi yezoKhenketho yaseSingapore (STB) iququzelele i-webinar yokuhamba ekuqaleni kwalo nyaka ngoJulayi ebone inxaxheba enkulu. “Ezo zigqibo zinemveliso zihlala zamkelwa licandelo lezokhenketho kunye nemibutho yokhenketho njengoko eyona nxalenye yezoqoqosho ixhomekeke kuhambo nakukhenketho. Uqoqosho kuyo yonke indawo lufuna imvuselelo entle ngakumbi emva kokwenzakala kweCovid, utshilo uBettaiah Lokesh, uNobhala Jikelele oHloniphekileyo, TAAI.
"Iiarhente zokuhamba ziyaqhubeka nokwamkelwa njengezisombululo zokumisa kubathengi, zikhokela kwaye zilawula ngobuchwephesha yonke imiba yohambo lwasekhaya kunye / okanye lwamazwe aphesheya ngoku olubandakanya ukuthobela iimfuno ze-Covid zokuhamba nokufika kwiindawo ekuya kuzo," utshilo uShreeram Patel, unondyebo oHloniphekileyo, TAAI. njengoko ekwadlulisele umbulelo wakhe kwabasemagunyeni bala mazwe omabini.